Atallah Béatrice : “Fanapahan-kevitra politika ny fanendrena ambasadaoro” | NewsMada
Atallah Béatrice : “Fanapahan-kevitra politika ny fanendrena ambasadaoro”
“Fanapahan-kevitra politika aloha ny fanendrena ambasadaoro. Tsy tokony hohadihadina koa fa solontenan’ny filoham-pirenena sy ny firenena malagasy ireny olona ireny.” Tenin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, teny Anosy, omaly, io, momba ny fanendrena ireo ambasadaoro malagasy miasa sy monina avy ivelany.
Mandinika lalina izay fanendrena ambasadaoro izay ny filoham-pirenena amin’izao fotoana izao. Tsy ho ela intsony, ho azo ireo olona hisolo tena ny Malagasy sy ny filoham-pirenena malagasy izay. Laharam-pahamehana avokoa ny fanendrena ambasadaoro amin’ireo masoivoho any ivelany. Telo na efatra sisa no misy ambasadaoro amin’izao.
“Tsy maintsy hametraka ireo masoivoho any ivelany isika, satria be dia be ireo masoivohontsika tsy misy masoivoho intsony”, hoy izy. Tsy misy ny ambasadaoro fa ny mpiandraiki-draharaha no mitantana ny masoivoho.
Misy fiofanana momba ny arofenitra
“Manana andraikitra manokana ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny”, hoy izy momba ny fandraisana ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia. Fototry ny diplaomasia ny arofenitra, mahasarotiny an-dry zareo any ivelany. Voalazan’ny Fifanarahana Vienne izany.
Misy àry momba ny arofenitra eo anivon’ny minisitera. Eo koa ny fakana ireo olona izay afa-manao izany any amin’ny minisitera hafa.
Notsiahiviny fa tsy an’i Frantsa ny Frankôfônia fa an’ireo firenena rehetra mampiasa ampahany na manontolo ny teny frantsay. Misy ny mangataka ho mpikambana toa an’i Géorgie, ohatra.